Sidee loo ogaadaa in ciyaar ka socoto kombuyuutarkayga 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Sideen ku ogaadaa in ciyaar ka socoto kombuyutarkayga? Waxaad si fudud ku ogaan kartaa adigoo kaashanaya qalab khaas ah sida websaydhka Ma wadi karaa. Haddii aadan rabin in kumbuyuutarkaaga la marsiiyo, waxaad aadi kartaa habka dhaqameed ee isbarbardhigaya qeexitaanka gacanta.
Hoos ka eeg sida loo arko haddii PC-gaagu daciif yahay ama uu si fiican u shaqeyn doono si uu ciyaarta u wado.
Iyada oo gacan ka heleysa degel gaar ah
Waxaa jira degello internet ah oo ku takhasusay isbarbardhiga qaaska kombiyuutarkaaga iyo shuruudaha ugu yar ee ay dalbadaan cayaaraha waaweyn ee suuqa. AMA Ma wadi karaa waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, awood u lahaanshaha xaqiijinta qaabeynta mashiinkaaga si otomaatig ah.
1. Furo biraawsarka aad dooratay oo tag Miyaan maamuli karaa?
2. Bogga ugu weyn, waxaad ku arki doontaa sanduuqa raadinta ee ay tahay inaad ku qorto magaca ciyaarta, sida, The Sims 4. Haddii ciyaarta laga heli karo buugga bogga, waxay ka muuqan doontaa liiska. Guji magaca u muuqda si looga fogaado qalad raadinta;
3. Kadib guji badhanka Waad wadi kartaa in la sameeyo cilmi baarista;
4. Bogga soo socda, shuruudaha ugu yar iyo kuwa ugu habboon ee lagu ordi karo ciyaarta ayaa la soo bandhigi doonaa. Si PC-gaaga loo falanqeeyo, waxaa lagama maarmaan ah inaad soo dejiso feyl u oggolaanaya websaydhka inuu hubiyo tilmaamaha farsamo ee mashiinkaaga. Si tan loo sameeyo, dhagsii badhanka Waad wadi kartaa inaad kala soo baxdo arjiga websaydhka;
5. Fur faylka la fulin karo oo sii bogga bogga fur. Barnaamijku wuxuu si otomaatig ah u bilaabi doonaa inuu falanqeeyo mashiinkaaga;
Waxay kuxirantahay biraawsarka, barnaamijka waxaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda hoosteeda markii soo dejintu dhammaato. Waxa kale oo laga heli karaa liiska soo dejinta ee browser iyo dabcan galka safarka.
6. Waqtiga baaritaanka wuxuu ku kala duwanaan karaa dhowr ilbiriqsi ilaa daqiiqado natiijada ka soo baxdaana waxaa lagu soo bandhigi doonaa bogga aad furantahay. Waxay kuu sheegaysaa haddii mashiinkaagu leeyahay shuruudaha ugu yar ee lagama maarmaanka ah iyo waliba kuwa lagu taliyay si ciyaarta ay u shaqeyso dhibaato la'aan.
Bogag kale si loo ogaado haddii ciyaarta ay ku socoto PC
PCGameBenchmark wuxuu kuu oggolaanayaa inaad gacanta ku gasho kombuyuutarkaaga ama soo dejiso barnaamij si toos ah u falanqeeya qeexitaanka mashiinka. Ka dib raadi magaca ciyaarta.
In kasta oo lagu takhasusay cinwaannada EA, Dooda Ciyaarta waxay leedahay ikhtiyaarro ka imanaya kuwa kale ee horumariya. Sida qalabkii hore, waxay kuu ogolaaneysaa inaad gacanta ku gasho xogta ama aad kala soo baxdo codsi ururiya macluumaadka ku saabsan PC isla markiiba. Marka, kaliya raadi ciyaarta aad rabto.
Hab kale oo lagu ogaan karo in kulan ka shaqeyn doono kombuyuutarkaaga iyo in kale ayaa ah inaad isbarbar dhig ku sameyso qeexida farsamo ee PC-ga iyo shuruudaha ugu yar ee ciyaarta looga baahan yahay. Xalku wuu qaadan karaa waxoogaa ka dheer boggaga internetka, laakiin sidoo kale waa wax fudud in la sameeyo.
Sida loo ogaado tilmaamaha PC-ga
Waxaad ku ogaan kartaa astaamaha farsamada kombiyuutarkaaga dhowr siyaabood. Kuwa ugu fudud iyaga ayaa ah iyada oo la qorayo ereyga Msinfo32.exe sanduuqa raadinta Windows. Waxay kuxirantahay nooca nidaamka, aaladda raadinta waxaa laga heli karaa bar-tilmaameedka ama qeybta bilowga (adoo gujinaya astaanta Windows).
Natiijada raadinta, guji Msinfo32.exe in lafuro. Haddii aadan awoodin, waxaa laga yaabaa inaad u baahato U socodsii maamule ahaan. Si aad u aragto ikhtiyaarka, kaliya midig guji natiijada.
Daaqadda Macluumaadka Nidaamka, dhinaca bidix, guji Nidaamka oo kooban. Waxaad ka arki kartaa macluumaadka ku saabsan nidaamka qalliinka (1), processor (2) mi xusuusta (3).
Si aad u hubiso keydinta, dhagsii Kaydinta ka dibna gudaha Units.
Sikastaba, si aad uhesho qaabka kaarkaaga fiidiyowga, dhagsii Qeybaha ka dibna gudaha Bandhig. Haddii kumbuyuutarkaagu leeyahay kaar u heellan iyo kaar la dhisay, xogta labada noocba waa la soo bandhigi doonaa.
Hagahayaga Eeg dejimaha kombuyuutarka wuxuu sharxayaa sida loo eego faahfaahinta oo faahfaahsan noocyada kala duwan ee Windows. Weydii haddii aad rabto inaad macluumaad dheeraad ah ka ogaato mowduuca.
Haddii aad rabto inaad dedejiso howsha, waad isticmaali kartaa barnaamijka Gawaaridawaxaa qoray CCleaner. Nooca bilaashka ah wuxuu xaqiijin karaa qalabka wuxuuna bixin karaa macluumaadka lagama maarmaanka u ah si loo arko haddii ciyaar la jaanqaadi karto mashiinkaaga.
Kaliya soo dejiso, rakib oo guji badhanka Orod Speecy. Ilbidhiqsiyo gudahood, xogta ku saabsan qalabka ayaa la soo bandhigayaa, sida hoos ka muuqata. Intaa waxaa dheer, heerkulka CPU iyo kaarka fiidiyaha sidoo kale waa la soo sheegay.
Isbarbardhiga shuruudaha ciyaarta ugu yar
Markaad gacanta ku hayso tilmaamaha farsamada kombiyuutarkaaga, si fudud u hubi shuruudaha ugu yar ee lagama maarmaanka u ah ciyaarta inuu ku socdo mashiinka. Macluumaadkan waxaa badanaa laga heli karaa degellada websaydhada iyo barnaamijyada martigeliya.
On Steam, tusaale ahaan, macluumaadka waxaa laga heli karaa qaybta Ku saabsan kulankaan. in Shuruudaha nidaamka, waa shuruudaha ugu yar ee lagu taliyay in lagu isticmaalo ciyaarta kombiyuutarka.
Marka laga hadlayo Fifa 21, natiijada soo socota ayaa la soo bandhigayaa:
Beddelka ayaa ah in la isticmaalo bogag buuxiya shuruudaha ugu yar ee kulamada waaweyn hal meel. Kaliya ku raadi magac si aad u hesho waxaad rabto.
Ma wadi karaa, PCGameBenchmark iyo Dood Cayaareed ayaa bixiya xogtan. Iyaga ka sokow, waxaa jira bogga Shuruudaha Shuruudaha Nidaamka Ciyaaraha.
Shuruudaha ugu yar x Shuruudaha lagu taliyay
Shuruudaha ugu yar waxay muujinayaan qalabka awooda u leh ciyaarta. Si kastaba ha noqotee, way ka shaqeyn doontaa si ka wanaagsan, sida muuqaal jilicsan oo ka fiican, haddii PC-ga uu leeyahay tilmaamaha lagu taliyay.
Nidaamka hawlgalka iyo meesha disk loo baahan yahay kuma kala duwanaan karaan shuruudaha ugu yar iyo kuwa lagu taliyay. RAM-ka, processor-ka iyo kaarka sawir gacmeedyadu waa qaybaha si weyn ugu kala duwanaan kara midba midka kale.
Emulators-ka ugu fiican uguna fudud ee Android inuu ku ciyaaro kumbuyuutarrada daciifka ah
Fursadaha duubista shaashadda ee PC daciifka ah
Sida loogu xiro telefoonkaaga TV-ga aan smart-ka ahayn 5 siyaabood oo kala duwan